सरकारको काम नराम्रो देख्ने आँखा चाहिँ नराम्रा ! : सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा - नेपाल घटना
सरकारको काम नराम्रो देख्ने आँखा चाहिँ नराम्रा ! : सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा
प्रकाशित : १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १६:०५
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सरकारले एउटा पनि नराम्रो काम नगरेको दाबी गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित नियमति पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सञ्‍चारकर्मीले सरकारका २ वर्षका राम्रा कामबारे सोधिएको थियो । प्रश्‍नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘नराम्रा काम एउटा पनि गरेको छैन । जति गरियो राम्रै राम्रा । नराम्रो देख्ने आँखा चाहिँ नराम्रा । राम्रो कुरा नदेखाइदिने, नराम्रो मात्र लेख्ने हातहरुबारे पनि म कहिले बाँकी प्रश्न गर्छु नि ।’
प्रधानमन्त्रीले खास सम्बोधन गर्ने र सरकारले २ वर्षमा गरेका कामबारे बताउने उनले सुनाए । भोलि संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले विभिन्न सूचकांकहरुमा नेपालको अवस्था सुधार भएको सुनाए ।
विधिको शासन बलियो भएको, भ्रष्टाचार घटेको, शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो भएको, सुखी नेपाली, समृद्धि नेपाली कार्यक्रमको नजजिता देखिन थालेको बताए । जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको तर त्यो सरकारले सोचे जस्तो नभएको उनले बताए । डेमोक्रेसी इन्डेक्समा समेत नेपालको स्थान सुधार आएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले भने, अधिनायकवादको हौवाले हावा खायो ।’
जयनगर विजलपुरा रेल यही वर्ष गुड्ने, पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन भइसकेको तथा काठमाडौं केरुङ रेलको प्रारम्भीक अध्ययन भइसकेको, पानी जहाजको कार्यालय खोलिएको भन्दै उनले भने, ‘३ हजारभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ ।’